इङल्याण्डमा लकडाउन गाइडलाइन : नयाँ व्यक्तिसंग यौन सम्पर्क गर्न नपाइने
कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बचाउनका लागि इङल्याण्डमा सरकारले नयाँ नियम लागु गरेको छ । नियम अनुसार आफ्नो घरमा कोही पनि नयाँ व्यक्तिसंग यौन सम्पर्क गर्न पाइने छैन । यो नियम लकडाउनको गाइडलाइन अनुसार बनेको हो । गाइडलाइन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो घरमा एकजना भन्दा बढी पाहुना बोलाउन पाउने छैन र कसैको घर जाने व्यक्तिले पनि अर्काको घर जानुको..
डक्ट–टेपमार्फत भित्तामा टासिँएको एक केराको कलाकृति मूल्यको कारण चर्चामा छ । मियामीस्थित आर्ट बसलमा बुधबार उक्त कलाकृत्ति १ लाख २० हजार डलरमा बिक्री भयो । यो कलाकृत्तिलाई पेरिसको आर्ट ग्यालरी पेर्रोटिनले प्रदर्शनमा राखेको थियो । आर्ट ग्यालरीका अनुसार कलाकृत्तिको तीन संस्करण बनाइएको छ र त्यसमध्ये दुईको विक्रि भइसकेको छ । यसलाई..
फोन ह्याङ हुन्छ ? थाहा पाइराख्नुस् यी ५ टिप्स
यदि तपाइँको फोन बारम्बार ह्याङ् भएर समस्या दिन्छ भने तपाइँले कुनै गल्ती गरिरहनु भएको छ । यी कुरामा ध्यान दिनु भो भने तपाइँको फोन कहिले पनि ह्याङ हुने छैन । टिप्स नम्बर १: यस्ता फाइल र फोल्डर जसको प्रयोग कम हुन्छ यस्तालाई क्लाउड स्टोरमा स्टोर गर्नुस् । यसो गर्दा मोबाइलको इन्टरनल मेमोरी खाली रहन्छ । क्लाउड स्टोर भर्चुअल ड्राइभ जस्तै हो..
स्कटल्याण्डबाट ३२१ किलोमिटर उत्तरी भुभागमा रहेको फारो टापुस्थित समुद्र रगतले भरिएको छ । कसरी समुद्रमा त्यति धेरै रगत पोखियो र समुद्रको पानी नै रातो भयो ? यो एउटा विचित्रको रहस्यको कुरा हुनसक्छ । रिपोर्ट अनुसार डेनमार्क अधिनस्थ फारो टापुमा रहेको समुद्रमा एकै ठाउँ जम्मा भएका ठूलो संख्याका ह्वेल माछा मारेपछि समुद्रको पानी रगताम्य भएको..
फुटबलको भविष्यवाणी गर्ने बिरालोको मृत्यु
जारी विश्वकप फुटबलका विभिन्न ६ वटा खेलको सही भविष्यवाणी गर्ने एउटा चिनिया बिरालोको मृत्यु भएको छ । उक्त बिरालोको असामयिक निधनपछि चिनियाँ सोसल मिडियामा हजारौँ मानिसहरुले श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका छन् । बैडियानएर नामको उक्त सेलिब्रेटी बिरालोका सुन्तला रङको भुत्ला थिए । यो बिरालो बेइजिङको फोर्बिडन सिटीस्थित दरबार संग्राहलय परिसरमा..